पर्यटनमा कति जाला ध्यान ? | संरक्षणका लागि ब्लगिङ (Blogging4Conservation]
Home » पर्यटन » पर्यटनमा कति जाला ध्यान ?
Posted by Prem Prasad Paudel Posted on Wednesday, April 04, 2012 with No comments
रसुवा खबर वर्ष १, अंक २१, २०६७ साल फागुन २१ गते शनिबार
गोसाईकुण्डको चिसो पवित्रता, लाङटाङ हिमालको अटल्ल दृश्य तथा जंगलका लालीगुँरासको फक्रनले रसुवालाई अझै विशाल बनाउँछ । यही रसुवाको पर्यटकीय क्षेत्रको रोजगारबाट धेरै मानिसले लाभ पाईरहेका छन् । मुलुकमा सबै सो पर्यटकीय क्षेत्रको सञ्चार माध्यममा प्रचारप्रसार भईरहँदा रसुवाको दृश्य अझै कुहिरोभित्रै लुकामारी गरिरहेको छ । पर्यटन वर्ष२०११ को तयारीको लागि लाङटाङ क्षेत्र संरक्षण सरोकार समाज, धुन्चेले २०६७ भदौमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । जिविसको परिषदमा कुनै पनि निकायबाट पर्यटन सम्बन्धि कार्यक्रम माग नभएको कारण बजेट नछुट्टयाइएको जिल्ला विकास समितिले बताएको थियो ।
गतवर्षको परिषदमा ५० हजार पाएको पर्यटन क्षेत्रले यसवर्षकति पाउला ? जिल्ला परिषदका पार्श्वदहरूमा पर्यटन वर्षको चित्र कोरिएको होला ! त्यसैमा भर पर्छ । पर्यटन वर्ष सम्पन्न गर्न बनेको समितिले पक्कै पनि जिल्ला परिषदमा कार्यक्रम पेश गर्न तयार रहनेछ । जिल्ला विकास समिति पक्कै योजनाको अभावमा पर्ने छैन । आवश्यकतालाई अध्ययन गरी जिविस रसुवाले योजना प्राथमिकीकरण गर्न सक्दछ । राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, गैसस, स्थानीयबासी सबैको योगदानमा रसुवा पर्यटन महोत्सव आयोजना हुनु नै पर्यटकीय विकास गर्न आधार निर्माण गर्नु हो । रसुवाका प्राकृतिक सम्पदाको विकास तथा प्रचारप्रसारको लागि योजना तय हुनु आवश्यक छ । समय समयमा आउने गरेका यस्ता वर्षरूमा रसुवा पछाडि नै परिरहेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष१९९८ मा रसुवामा कस्ता पर्यटन महोत्सव भए त्यसको अनुभव छैन मसँग तर २०६२ मा गरिएको 'लाङटाङ महोत्सव' मनाएको दृश्य भने छ । 'लाङटाङ महोत्सव' मनाउँदा धुन्चेमा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो तर ठूलोस्याफ्रुमा महोत्सवको प्रभाव पर्न सकेन । तामाङ हेरिटेज ट्रेलमा राम्रा गतिविधि भएको खबर पनि सुन्न र देख्न पाईएको थियो । रसुवामा प्रत्येक वर्ष१० हजार पर्यटक भित्रिने गरेका छन् । पर्यटन वर्षमा ३० हजार पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । ३० हजार पर्यटक कहिलदेखि हिशाब गरिने हुन् र कहिलेसम्म ? ३० हजार पर्यटकको लागि आवश्यक पूर्वाधार बासको व्यवस्थामा अभाव हुनेछ । होमस्टेमा पर्यटकलाई सेवा पुर्याउनको लागि पनि अभ्यास भएका होलान् कि ? होमस्टेको अवधारणा धुन्चे, स्याफ्रु ठूलोस्याफ्रु र तामाङ हेरिटेज ट्रेलमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर चन्दनबारी, लौरिविना र गोसाईकुण्डमा कुन् अवधारणा खडा गरेर सेवा पुर्याउने हो, अप्ठ्यारो छ । घरको नाममा ४/४ वटा होटलभन्दा अरू ओत लाग्ने ठाउँ कतै छैन यी तीनै ठाउँमा । १० हजार मात्र पर्यटक आउँदा पनि कहिलेकाहीँ पर्यटकले बस्ने ठाउँ नपाएको हामीले देखेका छौं । जिल्ला विकास समितिको आगामी २५ गते बस्ने परिषदले पर्यटन वर्षमनाउन तयारी पनि गर्नेछ भन्ने आशावादी रहन सकिन्छ ।
रसुवा उद्योग वाणिज्य संघ, राजनीतिक दल, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र सहयोग आयोजना, उद्योगी, व्यापारी, नागरिक समाज, गैससहरू, सरकारी निकायका सबैका कार्यक्रममार् पर्यटन विकासका कृयाकलाप रहेमा मात्र पर्यटन वर्षसफल बनाउन सकिन्छ । पर्यटन वर्ष सुरू भएको दुई महिना बितिसक्यो, पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधार र रसुवाका सम्पदासँगको पहिचान विस्तार गर्नका लागि योजनाले यसवर्षप्राथमिकता पाउनेछ । विशेष गरी राजनीतिक दलहरूको भागवण्डामा रहेको जिविस परिषद यीलगायतका वातावरण संरक्षणका एजेण्डाहरूमा केन्द्रित रहनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधारलाई भन्दा संरक्षणको पाटोलाई परिषदले अँगाल्नु पर्दछ ।